Ifomathi entsha ye-InfoGEO kunye nee-InfoGNSS iimagazini- iGeofumadas
Ngo-Okthobha, 2011 Geospatial - GIS, ezintsha
Kuluvuyo olukhulu ukubona ukuba ifomathi entsha ye-InfoGEO kunye ne-InfoGNSS yamaphephancwadi iphehlelisiwe, ebikade ifumaneka kwifomathi ye-pdf ukuze ikhutshelwe. Ifomathi entsha iphantsi kwenkonzo ebonelelwe yiCALAMEO kwimagazini yokukhangela kwi-Intanethi, eluncedo kakhulu ekukhangekeni nasekusebenzeni kokubrawuza.
Oku kuyafumaneka kwimiba engama-36 ye-InfoGEO kunye ne-65 ye-InfoGNSS, nangona kunjalo sikholelwa ukuba kwixa elizayo iintlelo zangaphambili zinokufundwa ngendlela efanayo. Umxholo wokuhlela kunye nomxholo uyafana, kodwa hayi umxholo oxhasiweyo obandakanya intengiso kunye namanqaku avela kwiinkampani kwicandelo le-geospatial, ke ezo ndawo zimbini zikhoyo ziyafumaneka zinikezela ngentengiso entsha ngaphambi kwababhalisi abangama-50,000 XNUMX abanawo omabini la maphephancwadi.
Kucacile, ezi phephandaba zinomgangatho ophezulu wokungena kuwo Imarike yaseBrazil, ngoku ngoku sikubona ngesiPutukezi kuphela, nangona siyiqonda loo nto MundoGEO iimpapasho Inokwimeko yeSpanishi nesiNgesi.
I-InfoGEO inamanqaku anomdla, njengokugubungela uMundoGEO # Qhagamshela umsitho we-2011 owawubanjelwe eSao Paulo ngoJuni ophelileyo. Ukongeza, isifundo ekulebhelisheni noMenzi weMephu kaGoogle, ukuthengisa izinto ezithile kunye nokwenza emva kwedatha ye-raster kuyabetha.
Kwimeko ye-IfoGNSS, inqaku eliphambili yiCadastre yobuchwephesha. Kukho udliwanondlebe noHola Rollen, u-CEO we-Hexagon Group, inkampani ethe kancinci kancinci yaba yinto enkulu yokufumana iinkampani ezinje nge-Intergraph, i-Erdas, i-Leica kunye ne-ViewServe.
Siyathemba ukuba le fomethi iya kwamkelwa kakuhle ngabasebenzisi, ngokukodwa abafundi beepulatifomu zeselula.
Xa sidlula, sithatha ithuba lokukhumbula ukuba ngeyoMsintsi kwabhengezwa ushicilelo lwesithathu lwe-FOSSGIS, itheyibhile entsha kodwa esikholelwa ukuba inamandla amakhulu ngendlela ebanzi nefanelekileyo. Ushicilelo lwesibini lwephephancwadi iLidar News luphehlelelwe kwindawo ye-Hispanic, ethi isimangalise ngenqaku elikwiphepha 41 apho iBentley Systems kunye ne-AutoDesk zithetha ngokudibeneyo kwi-Mobile LiDAR.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Imizuzu ye5 yokuzithemba kwiGoCivil
Post Next Iinqununu zeGoogle Street ViewOkulandelayo »